Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Aer Lingus maliteghachiri ụgbọ elu Dublin si ọdụ ụgbọ elu Budapest
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Hungary na -agbasa akụkọ • Akụkọ Mgbasa Ozi Ireland • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Onye na -ebu ọkọlọtọ Irish na -anabata ndị ahịa ka ha banye n'ụgbọ elu ya n'etiti Budapest na Dublin na nke mbụ kemgbe ọrịa ọjọọ bidoro.
Aer Lingus weghachiri njikọ ikuku Budapest-Dublin.
Aer Lingus ga-arụ ọrụ ugboro atọ kwa izu na Wednesde, Fraịde na Sọnde.
Nlaghachi nke Aer Lingus ga -akwalite ahịa Budapest n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oche 2,500 kwa ọnwa.
Izu gara aga hụrụ Ọdụ ụgbọ elu Budapest hụ nloghachi nke onye ya na ya nọrọla kemgbe Aer Lingus. Ije ozi n'ọnụ ụzọ Hungary kemgbe 2004, onye na -ebu ọkọlọtọ Irish na -anabata ndị ahịa ịlaghachi n'ụgbọ elu ya n'etiti Budapest na Dublin na nke mbụ kemgbe ọrịa ọjọọ bidoro.
Aer Lingus ga-arụ ọrụ ugboro atọ kwa izu na nnukwu obodo Ireland na Wednesde, Fraịde na Sọnde. N'iji ụgbọ elu ya nke A320s na mpaghara 1,912km, ụlọ ọrụ ụgbọ elu ahụ ga -akwalite ahịa Budapest site n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oche 2,500 kwa ọnwa.
Balázs Bogáts, Onye isi ụgbọ elu ụgbọ elu, Ọdụ ụgbọ elu Budapest na -ekwu, sị: “Ndị ọrụ ụgbọ elu ọ bụla ịlaghachi na Tarmac bụ ihe kpatara ememme na akara nke ịga n'ihu anyị. Usoro njikọ nke Aer Lingus bidoro na isi obodo Irish na-eme ogologo izu ụka zuru oke na ebe a ma ama maka ọdịbendị ya na nnabata ọdịdị ya. ”
Aer Lingus, Peter O'Neill, COO, kwuru, sị: "Obi dị anyị ụtọ ịkwado ụgbọ elu si na Budapest ma nabata ndị ahịa nọ n'ụgbọ ugbu a na -eme ka mmachibido njem pụọ." O'Neill na -agbakwụnye, sị: “Obi dị anyị ụtọ na anyị nwere ike ime ọzọ ihe anyị na -eme nke ọma maka ọtụtụ ndị ahịa - nyefee njem mba ofesi dị nchebe. ''